Lalao Open Source mahaliana izay azonao atao amin'ny Linux | Ubunlog
Lalao Open Source mahaliana izay azonao atao amin'ny Linux
Ekena fa tsy io no fahita indrindra, fa maninona, mpampiasa Linux koa dia tia lalao. Tsy miafina ihany koa fa ny ankamaroan'ny lalao PC, raha tsy izy rehetra, dia misy ho an'ny Windows ary maro amin'izy ireo koa no miseho amin'ny macOS, fa ny rafitra fiasan'i Microsoft no safidy tsara indrindra ho an'ireo mpilalao be mpitady indrindra. Ho an'ny Gamer mahazatra dia ity misy iray lisitry ny lalao tsara indrindra ho an'ny Linux.
Alohan'ny hanombohana ny lisitra dia tiako ny hanazava fa hiseho io lohateny loharano misokatra na loharano misokatra. Raha ny lojika dia tsy afaka mifaninana amin'ireo studio lehibe ireo lalao ireo raha tsy hoe ny tadiavintsika dia ny mandany fotoana miala voly. Amin'izany nohazavaina dia hiresaka momba ireo lalao 11 ireo isika izay tsy mety ho diso amin'ny PC Linux rehetra avy amin'ny mpilalao indraindray.
1 Lalao open source 11 ho an'ny Linux
1.5 Ny Dark Mod
1.7 Ny ady ho an'i Wesnoth
1.9 Tsiambaratelo Maryo Chronicles
Lalao open source 11 ho an'ny Linux
Heveriko fa mazava ny niavian'ny hevitra amin'ity lalao hazakazaka fiara ity. Raha tsy diso aho, ny lalao voalohany amin'ity karazana ity dia noforonin'i Nintendo ary ny mpandray anjara dia toa ny zava-drehetra, ilay plumber malaza Mario Mario (eny, ny anarana sy ny anarana voalohany ihany). Ny lalao tany am-boalohany, hoy hatrany aho raha tsy diso aho dia Super Mario Kart, noho izany dia mazava ny anaran'ny kinova loharano misokatra ho an'ny Linux: SuperTuxKart.
Ho an'ireo izay tsy mahalala lalao amin'ity karazana ity dia miatrika a lalao fifaninanana fiara, fa tsy amin'ny hazakazaka mahazatra izay tokony hifantohantsika ho haingana kokoa noho ny mpanohitra antsika, fa amin'ny hazakazaka izay tsy maintsy handratrantsika ireo fahavalontsika amin'ny fitaovam-piadiana sy tombony ho azontsika amin'ireo hazakazaka ihany koa.
Rehefa nividy ny solosaiko voalohany aho dia tadidiko fa anisan'ireo zavatra voalohany nataoko ny fahitana ny fivoaran'ny tontolon'ny horohoron-tany. Izaho dia efa nilalao Quake tamin'ny PC an'ny anadahy ary ny Quake 2 tamin'ny an'ny namako iray, ka dia nanandrana ny hitsapa ilay izy aho Horohoroina 3 arena. Ny lalao tsara iray izay mampivondrona ireo zavatra tsara rehetra momba an'io anaram-boninahitra io, ary mbola bebe kokoa aza dia ny Xonotic.
Raha ny marina, Xonotic ahitana maody lalao 16 samy hafa, ao anatin'izany ny Deathmatch sy Capture of Flag. Ireo fitaovam-piadiana tafiditra ao amin'ny Xonotic dia somary futuristic ihany, izay manome toky antsika fa tena ho mahavariana daholo izy rehetra.
Raha ny anao no Lalao stratejika, ny tsara indrindra (maimaim-poana) azonao lalaovina amin'ny Linux dia antsoina hoe 0 AD Amin'ity tranga ity dia lalao napetraka amin'ny fotoana manan-tantara izany, saingy mieritreritra aho fa ny zavatra hafa rehetra dia tena mitovy amin'ny sisa amin'ireo lalao paikady eny an-tsena.
Tadidiko efa am-polony taona lasa izay, raha mbola tsy nanana ny PC-ko voalohany aho, nilalao lalao izay nisy ekipa roa misy kankana 4 tokony hifamono. Miresaka aho kankana, izay nifehy ekipan'ny kankana izay tsy maintsy namono ekipa hafa misy kankana 4 tamin'ny fampiasana fitaovam-piadiana isan-karazany, avy amin'ny baomba, osy mipoaka, totohondry na fanafihana an'habakabaka mihitsy aza.
Toy ny lalao maro isehoan'ny Tux, Hedgewars no kinova misokatra amin'ny lalao hafa, amin'ity tranga ity dia Worms voalaza etsy ambony. Ny tena maha samy hafa azy dia ny mahery fo ao Hedgewars dia hedgehogs (Hedgehog amin'ny teny anglisy, ka izany no anarany).
Ny Dark Mod
Ny Dark Mod dia lalao iray izay tsy maintsy ataontsika mifehy mpangalatra fa tsy maintsy mampiasa fitaovana isan-karazany ianao mba hialana amin'ny fandrahonana sy handrosoana amin'ny scenario. Ny hitantsika dia sarin'olona voalohany amin'ny zava-mitranga rehetra, zavatra efa zatra hitantsika amin'ny lalao FPS na olon-tsotra.
Manaraka kely amin'ny klones, ny lalao manaraka amin'ity lisitra ity dia Voxelands, amin'ity tranga ity dia lohateny miorina amin'ny malaza (na dia tsy azoko manokana aza ny antony) Minecraft.
Ny ady ho an'i Wesnoth
Izaho, izay tsy maintsy miaiky fa tsy dia mpankafy lalao tetikady aho, dia nankafy lalao roa farafahakeliny amin'ity karazana ity: Warcraft II sy XCOM. Ny tenako dia gaga tamin'ny habetsaky ny ora nandaniako ny lalao paikady mifototra amin'ny fihodinana satria izy no faharoa amin'ireo roa nolazaiko ireo, indrindra noho ny fihodinanan'ny hetsika, toa ny catur ihany.
Battle for Wesnoth dia lalao paikady mifototra amin'ny turn, fa toerana mahafinaritra. Ny mpilalao dia tsy maintsy mifehy andian-tsoratra, izay samy manana ny mampiavaka azy, mandra-pahatongantsika ny tanjon'ny sehatra na handresentsika ny fahavalo.
OpenTTD dia mamerina ny lalao 1995 Transport Tycoon Deluxe izay tsy maintsy hitantanana rafitra fitaterana an-drenivohitra. Ny tanjon'ny lalao dia ny fananganana tambajotra fitaterana mampiasa karazana fiara isan-karazany, toy ny lamasinina, sambo, fiaramanidina ary kamio. Ho fanampin'izany, hahazo vola isika amin'ny alàlan'ny fanaterana entana, vola azontsika ampiasaina hananganana fotodrafitrasa tsaratsara kokoa sy mahomby kokoa.
Tsiambaratelo Maryo Chronicles
Ny teny hoe "Tsiambaratelo" dia hita ao amin'ny lohatenin'ity lalao ity, saingy tsy miafina izany mifototra amin'ny saga Mario Bros. Ny zavatra tsara an'ity anaram-boninahitra ity raha oharina amin'ny hafa dia manolotra traikefa an-tsehatra tsaratsara kokoa sy ankamantatra piozila betsaka kokoa noho ny lalao hafa mitovy amin'izany
Pingus dia klone iray amin'ny lalao PC malaza be hafa antsoina hoe Lemmings. Ao amin'ny Pingus sy ny lalao ifotoran'ity lohateny ity, ny tanjonay dia ny hampanao ireo penguin hanao izay angatahany hatao isaky ny ambaratonga. Hanao toy ny karazana "andriamanitra" isika izay mila mitarika azy ireo hahatratra ny tanjony.
Ary tsy afaka namita an'ity lisitra ity izahay raha tsy nanampy a lalao sambo. AstroMenace dia mampatsiahy tokoa ny lalao sambo izay mety ho hitantsika tamin'ny arcade of the 90s, fa miaraka amin'ny fahasamihafana manan-danja izay tonga amin'ny endrika fanatsarana ny karazana rehetra, zavatra iray izay tena miavaka amin'ny sary sy ny feo.
Inona no lalao loharano ankafizinao indrindra ho an'ny Linux?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Lalao Open Source mahaliana izay azonao atao amin'ny Linux
Jose Enrique Monterroso Barrero dia hoy izy:
Mbola manana sisa kely eto izy. Ataovy mifanaraka amin'ny linux ny programa windows. Na manaova programa mitovy amin'izany. Izay no antony ampiasako ny windows 7 sy ny linux ...
Valiny tamin'i Jose Enrique Monterroso Barrero
Richard Videla dia hoy izy:
Tsy ny penguin mahantra no olana, raha tsy ireo mpamokatra rindrambaiko mifantoka amin'ny windou $ ihany. Saingy ao an-trano dia tsy miankina amin'ny windows isika fa manao ny zavatra rehetra amin'ny GNU / Linux !!!
Valiny tamin'i Richard Videla
Hataoko ohatra Widelands, FreeCiv, FlightGearSimulator, LiChess, Pioneer Space Sim, wz2100, UFO AI, Speed ​​Dreams .. 😉
Miaraka amin'i Steam dia toa miova ny toe-javatra
Freeorion sy Warzone 2100 ihany koa
TSY JEREO NY SARY.
3nc0d34d dia hoy izy:
koa ny Eclipse Mena, na dia efa lany andro aza
Valiny amin'ny 3nc0d34d
Ireo vatosoa Diamondra ilaina
Valiny amin'i CJ
Carlos Flores dia hoy izy:
Ampidino izao ny Astro Menace.
Misy olona afaka manampy ahy hametraka azy (mbola tsy haiko ny baiko)
Valiny tamin'i Carlos Flores
Gerson Celis dia hoy izy:
Inona no ilàna ny lalao tolo-kevitra raha tsy lazain'izy ireo hoe aiza no hahitana azy ireo ary ahoana no hametrahana azy ireo? oh ny Secret Maryo Chronicles sy Dark Mod dia tsy ao amin'ny magazay Gnome (Ubuntu Software) ¬¬
Valiny tamin'i Gerson Celis
Julian Veliz dia hoy izy:
Mora kokoa ny mametraka amin'ny Flatpak. https://flathub.org/apps/details/com.viewizard.AstroMenace
Hamarino tsara fa hanaraka ny torolàlana fananganana alohan'ny hametrahana
apetraho flatpak flathub com.viewizard.AstroMenace
Valiny tamin'i Julian Veliz
louis loharano dia hoy izy:
chromium bsu, opentyrian, fanjakana fito, sauerbraten / cube2, xonotic, nexuiz, supertuxkart, kely indrindra, ady ho an'ny wesnoth, doka 0, nofinofy / torcs hafainganam-pandeha, ambanin'ny lanitra vy, doom3, miverina any amin'ny wolfenstein lapa, horohoron-tany 3, dosbox, scummvm, retroarch, dolphin, pcsx2, sns. winehq miaraka amin'ireo kilasika hatramin'ny 2007 ary ny etona izay miakatra miaraka amin'ny filalaovana proton eo amin'ny fanohanana.
Valiny tamin'i Luis Fuentes
mpilalao linux dia hoy izy:
Miala tsiny aho fa tsy manaiky ny fanehoan-kevitra hoe tokony hiala amin'ny Linux ny mpilalao tena mitaky satria ny tontolon'ny lalao video dia nivoatra be ary tsara tao amin'ny Linux dia afaka mampiasa emulator foana isika ary manana traikefa amin'ny lalao tena tsara. Mpilalao linux aho
Valio ny gamer linux
Ubuntu 12.04 ESM, Ubuntu ho an'ny lavitra indrindra ao aoriana
Ahoana ny fananana dock ao amin'ny Lubuntu